Ruushka oo dalkiisa ka cayrinaya 23 danjire ee British ah – Daily Som
Ruushka oo dalkiisa ka cayrinaya 23 danjire ee British ah
By Staff on March 17, 2018 No Comment
dowlada Ruushaka ayaa dalkeeda ka soo saartaan diblomaasiyiin udhashay dalka Britin waxaana la sheegayaa in ay jawaab utahay soo saaristii ay dhawaan samaysay Dowlada Ingriiska ay ka soo saartay danjirayaal udhashay rushka.
Xukuumada Moscow ayaa uqabatay diblomaasiyointa la cayrinayo mudo asbuuc ah, tira ahaane waxa ay gaarayaan 23 danjire iyada oo la xirayo Academiyada dhaqan ee ingriisku ku leeyahay Magalada Moscow ee Xarunta Ruushka.
sidoo kale waxaa la filayaa in albaabada loo laabo qunsuliya UK ee ku taala magaalada St Petersburg, waxa ay talaabooyinkaas jawaab uyihiin taaloobooyin ay horeay uqaaday Xukuumada UK o dalkeeda uga soo saaraysa danjirayaal udhsay ruushka.
Haweenayda Hogaamisa ingriiska ayaa ku hanjabtay in ay asan udul qaadan doonin in dalkeeda lagu dhibaateeyo muwaadiniinta british ka ah iyo kuwa jale ee imaada dalkaas.
Ruushka oo dalkiisa ka cayrinaya 23 danjire ee British ah added by Staff on March 17, 2018